အီတလီ အတိုးမဲ့ချေးငွေ ယူရိုသန်း ၃၀ ဖြင့် ကျေးလက် အိမ်ထောင်စု တစ်သိန်းခန့် မီးလင်းအောင်ဆောင? - Yangon Media Group
အီတလီ အတိုးမဲ့ချေးငွေ ယူရိုသန်း ၃၀ ဖြင့် ကျေးလက် အိမ်ထောင်စု တစ်သိန်းခန့် မီးလင်းအောင်ဆောင?
အီတလီနိုင်ငံ မှ အတိုးမဲ့ချေးငွေယူရိုသန်း ၃၀ ဖြင့် ကျေးလက်အိမ်ထောင်စု တစ် သိန်းခန့်မီးလင်းအောင် ဆောင် ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ သြဂုတ် ၁ ရက် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိ ရေး၊ မဟာဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပ ကျေးလက်မီးလင်းရေးစီမံကိန်း အတွက် အီတလီနိုင်ငံမှ ယူရိုသန်း ၃၀ ချေးယူဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုရန် တင်ပြရာ၌ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး နှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင် သူက အထက်ပါအတိုင်းထည့် သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
““ဒီစီမံကိန်းကို ချင်းပြည်နယ် နှင့် အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ ကျေးရွာများမှ အိမ်ထောင်စု ၉၆၅၀၀ ခန့်အတွက် ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါချေးငွေဟာ အတိုးမဲ့ချေး ယူရမှာဖြစ်ပြီး ဆိုင်းငံ့ကာလ ၁၈ နှစ်၊ ပြန်ဆပ်ကာလ ဆယ်နှစ် ဖြစ် ပါတယ်””ဟု ၎င်းင်းကပြောသည်။ လက်ရှိတွင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံ လုံးရှိ ကျေးရွာပေါင်း ၆၃၈၉၉ ရွာ အနက် မီးလင်းသည့် ကျေးရွာမှာ ၂၄၂၉၀ ရွာခန့်သာရှိကြောင်း၊ ကျန် ၃၉၆၀၉ ရွာခန့်ကို မီးလင်းနိုင်ရေး အတွက် အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓာတ် အားပေးစီမံကိန်း မဟာဓာတ်အား လိုင်းပြင်ပကျေးလက်မီးလင်းရေး စီမံကိန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ကြောင်း ၎င်းင်းကပြောသည်။
မဟာဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပ ကျေးလက်မီးလင်းရေးအတွက် တစ်အိမ်သုံးဆိုလာစနစ်နှင့် အသေး စားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးလုပ်ငန်း စနစ်တို့ကို အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ် ပြီး တစ်အိမ်သုံးဆိုလာစနစ်အ တွက် စီမံကိန်းနေရာရွေးချယ်ရာ၌ နောင် ဆယ်နှစ် ၁၅ နှစ်အထိ မဟာဓာတ်အားလိုင်းမရောက်ရှိ သည့် ကျေးရွာများ၊ အိမ်ခြေနှင့် လူနေထူထပ်သည့် ကျေးရွာများ စသည့် အချက်များကို အခြေခံ ကြောင်း၊ အသေးစားလျှပ်စစ်ဓာတ် အားပေးလုပ်ငန်းအတွက် စီမံကိန်း နေရာရွေးချယ်ရာတွင် နောင် ၁၅ နှစ်အထိ မဟာဓာတ်အားလိုင်း မရောက်ရှိသည့် ကျေးရွာများ၊ ပြည် သူလူထုမှ ထည့်ဝင်ငွေရာခိုင်နှုန်း ၂၀ ထည့်သွင်းနိုင်သည့် ကျေးရွာ များ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခပေး ဆောင်လိုသည့် ကျေးရွာများစသည် တို့ကို အခြေခံရွေးချယ်ကြောင်း ၎င်းင်း က ပြောသည်။
““ကျေးရွာတွေကို မီးလင်း ရေးစီမံကိန်းတွေ လုပ်ဆောင်ရာ မှာ စာသင်ကျောင်းများ၊ကျန်းမာ ရေးဆေးပေးခန်းများ၊လမ်းမီးများ နှင့်ဘာသာရေး အဆောက်အအုံ များကို စီမံကိန်းက အခမဲ့ဆောင် ရွက်ပေးသွားမှာပါ””ဟု ၎င်းင်းက ပြောသည်။ ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် တစ်နိုင်ငံ လုံးမီးလင်းရေးအတွက် ရည်မှန်း ချက်ထား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ သည်။ ကမ်္ဘာ့ဘဏ်ချေးငွေ အမေ ရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၄၀၀ ဖြင့် အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိ ရေးစီမံကိန်းကို လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်း အင်ဝန်ကြီးဌာနမှ ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၁၀ ဖြင့် မဟာဓာတ်အားလိုင်း တိုးချဲ့သွယ်တန်းခြင်းများ ဆောင် ရွက်ပြီး စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ မဟာ ဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပကျေးလက် မီးလင်းရေးစီမံကိန်းကို အမေရိကန် ဒေါ်လာသန်း ၉၀ ဖြင့် ဆောင် ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဒုံးကျည် အစိတ်အပိုင်းများ ရရန် ဘာလင်ရှိ သံရုံးကို မြောက်ကိုရီးယား အသုံးချနေဟု ဂျာမနီ စွပ်စ?